Loka K-Pop Indonezia Voalohany Mivantana ankehitriny
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Loka K-Pop Indonezia Voalohany Mivantana ankehitriny
Novambra 19, 2021
Tokopedia, orinasa teknolojia manana tsena any Indonezia, dia nanambara ny filaharan'ny vondrona megastar manerantany 10 Koreana Tatsimo tamin'ny fandefasana voalohany maneran-tany WIB: Indonezia K-Pop Awards tamin'ny 25 Novambra 2021.
Ireo vondrona 10 ireo dia BTS sy BLACKPINK, masoivohon'ny marika roa ao amin'ny Tokopedia, ary koa TWICE, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number ary Aespa.
WIB: Indonezia K-Pop Awards dia hetsika fanomezana avy amin'ny vondrom-piarahamonina Indoneziana ho an'ireo vondrona megastar manerantany voalaza etsy ambony izay nifidy tamin'ny alalan'ny Tokopedia ny mpankafy azy. Ny WIB Indonesia K-pop Awards 2021 no seho voalohany natokana ho an'ireo mpankafy K-pop any Indonezia, ary hanolotra fampisehoana manokana isan-karazany avy amin'ireo vondrona ihany koa.
Ireo vondrom-piarahamonina manerantany dia afaka mandefa WIB: Indonezia K-Pop Awards amin'ny 25 Novambra amin'ny 19.00:21.00 hatramin'ny 7:XNUMX Jakarta Time (UTC+XNUMX) amin'ny alàlan'ny Tokopedia Play ao anatin'ny fampiharana Tokopedia sy ny fantsona Youtube ofisialin'ny Tokopedia. Afaka mijery ny seho amin'ny alalan'ny rohy manaraka ireo mpankafy ary entanina hametraka fampahatsiahivana mba tsy ho diso ny voalohany.
Ny fandraisan'anjaran'ireo vondrona megastar manerantany Koreana Tatsimo isan-karazany tamin'ny hetsika Indonezia Shopping Time (Waktu Indonesia Belanja na WIB) nataon'i Tokopedia teo aloha dia noderaina fatratra, niteraka resadresaka tao amin'ny media sosialy eny fa na dia nisongona tamin'ny lohahevitra malaza maneran-tany aza.
Ny hetsika WIB an'ny Tokopedia dia atao isaky ny 25 ka hatramin'ny faran'ny volana. Ny Indoneziana dia afaka mahita vokatra isan-karazany miaraka amin'ny tolotra manintona isan-karazany mba hahomby kokoa ny fiantsenana.